ဇနီးသည်မီးဖွားတဲ့အခါ ခင်ပွန်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုခွင့်ခံစားခွင့်တွေ ရရှိနိုင်လဲ? - For her Myanmar
ဇနီးသည်မီးဖွားတဲ့အခါ ခင်ပွန်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုခွင့်ခံစားခွင့်တွေ ရရှိနိုင်လဲ?
by Yin Sandi Ko
ယောကျာ်းဖောင်စီး မိန်းမမီးနေဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲ ယောင်းရေ…အမျိုးသားတွေအတွက် ရေလမ်းခရီးသွားလာနေချိန်က အသက်အန္တရယ်များသလို ယောင်းတို့အတွက်ကတော့ မီးဖွားချိန်ကအသက်အန္တရာယ်ကို စတေးရတဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချိန်ပါပဲ။
ပုံမှန်အချိန်တွေမှာ တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာယရပ်တည်နိုင်ပေမဲ့ မီးဖွားချိန်တွေမှာတော့ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေ ရှိတာကြောင့် ယောင်းတို့စိတ်ထဲကြောက်စိတ်တွေ ၊ အားငယ်စိတ်တွေနဲ့ ယောင်းတို့ခင်ပွန်းတွေကို အနားမှာရှိစေချင်မှာ မင်မင်ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။ မီးဖွားချိန်မှာ ယောကျာ်းကအလုပ်ခွင့်မရရင် ဒုက္ခပါပဲဆိုပြီး စိုးရိမ်ပူပန်ရတာတွေလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ မင်မင်ကနေ ယောင်းတို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို လျှော့ချပေးဖို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခင်ပွန်းတွေရရှိနိုင်တဲ့ ခွင့်တွေနဲ့ မီးဖွားစရိတ်အကျိုးခံစားခွင့်တွေ အကြောင်း ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ယောင်းရေ… ယောင်းတို့ကို မျှဝေပေးချင်လွန်းလို့ အက်ဒ်မင်က ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လ် HR မမထူးသန့်စင်ကို ကိုယ်တိုင် သွားမေးပေးလာတာနော်..
ပထမ တစ်ခုကတော့ ယောင်းရော ယောင်းအမျိုးသားပါ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကို အနည်းဆုံး(၆)လ ပေးသွင်းထားမယ်ဆိုရင် ယောင်းအမျိုးသားအနေနဲ့ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခွင့်(၁၅)ရက် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခွင့်ရရှိတဲ့(၁၅)ရက်အတွက်ကိုလည်း မီးဖွားခြင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုပြီး တစ်နှစ်အတွင်း အမျိုးသားရဲ့ ပျမ်းမျှလုပ်ခလစာ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းကို ထပ်ဆောင်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ယောင်းအမျိုးသားက လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာ အနည်းဆုံး တစ်နှစ် လုပ်ကိုင်ဖူးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> ကိုယ်ဝန်ဆောင်ယောင်းတို့အတွက် ယောဂကျင့်စဉ်များ
ယောင်းတို့က လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ အနည်းဆုံး(၆)လ ပေးသွင်းထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ မီးဖွားခွင့်(၁၅)ရက်ရရှိပေမဲ့ မီးဖွားစရိတ်တွေတော့ အပြည့်ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အာမခံကြေးသွင်းထားသူတွေရဲ့မီးဖွားစရိတ် တစ်ဝက်ကိုသာ ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မှာပါယောင်းရေ.. ဒီအမျိုးအစားမှာလည်း ယောင်းတို့အမျိုးသားက လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာ အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လုပ်ကိုင်ဖူးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးဖွားစရိတ်တွေကိုတော့ ယောင်းတို့ရင်သွေးတစ်ယောက်မွေးဖွားရင် အပေါ်ကဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ ယောင်းတို့က အမြွှာလေးမွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ရရှိနိုင်မယ့်မီးဖွားစရိတ်ရဲ့ နှစ်ဆထိ တိုးမြှင့်ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်(အမြွှာလေးရအောင်သာ မွေးပစ်ယောင်းရေ )
ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ အကျင့်ဆိုးများ
ယောင်းတို့ရေ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေရနိုင်လဲ သိပြီးပြီဆိုတော့ ဘေဘီလေးတွေကို စိတ်အေးလက်အေး မွေးဖွားလို့ရပြီပေါ့နော်။ ယောင်းတို့ အမျိုးသားတွေကလည်း ယောင်းတို့ဘေးမှာစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှာမို့ ယောင်းတို့ အားငယ်စရာမလိုဘဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ မွေးဖွားနိုင်ပါစေနော်။
DiDi (For Her Myanmar)
ယောကျြားဖောငျစီး မိနျးမမီးနဆေိုတဲ့စကားအတိုငျးပါပဲ ယောငျးရေ…အမြိုးသားတှအေတှကျ ရလေမျးခရီးသှားလာနခြေိနျက အသကျအန်တရယျမြားသလို ယောငျးတို့အတှကျကတော့ မီးဖှားခြိနျကအသကျအန်တရာယျကို စတေးရတဲ့ အရေးကွီးဆုံးအခြိနျပါပဲ။ ပုံမှနျအခြိနျတှမှော တဈကိုယျရတေဈကာယရပျတညျနိုငျပမေဲ့ မီးဖှားခြိနျတှမှောတော့ ဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲတှေ ရှိတာကွောငျ့ ယောငျးတို့စိတျထဲကွောကျစိတျတှေ ၊ အားငယျစိတျတှနေဲ့ ယောငျးတို့ခငျပှနျးတှကေို အနားမှာရှိစခေငျြမှာ မငျမငျကိုယျခငျြးစာမိပါတယျ။ မီးဖှားခြိနျမှာ ယောကျြားကအလုပျခှငျ့မရရငျ ဒုက်ခပါပဲဆိုပွီး စိုးရိမျပူပနျရတာတှလေညျး ရှိကောငျးရှိနိုငျပါတယျ။
ဒီတော့ မငျမငျကနေ ယောငျးတို့စိုးရိမျပူပနျမှုတှကေို လြှော့ခပြေးဖို့အတှကျ ကိုယျဝနျဆောငျခငျပှနျးတှရေရှိနိုငျတဲ့ ခှငျ့တှနေဲ့ မီးဖှားစရိတျအကြိုးခံစားခှငျ့တှေ အကွောငျး ဝမြှေပေးခငျြပါတယျယောငျးရေ… ယောငျးတို့ကို မြှဝပေေးခငျြလှနျးလို့ အကျဒျမငျက ပရျောဖကျရှငျနယျလျ HR မမထူးသနျ့စငျကို ကိုယျတိုငျ သှားမေးပေးလာတာနျော.. ယောငျးတို့ခငျပှနျးသညျတှရေရှိနိုငျတဲ့ ခှငျ့အမြိုးအစား(၂)မြိုးရှိပါတယျယောငျးရေ…
ပထမ တဈခုကတော့ ယောငျးရော ယောငျးအမြိုးသားပါ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကို အနညျးဆုံး(၆)လ ပေးသှငျးထားမယျဆိုရငျ ယောငျးအမြိုးသားအနနေဲ့ ကလေးပွုစုစောငျ့ရှောကျခှငျ့(၁၅)ရကျ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ခှငျ့ရရှိတဲ့(၁၅)ရကျအတှကျကိုလညျး မီးဖှားခွငျးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ အကြိုးခံစားခှငျ့ဆိုပွီး တဈနှဈအတှငျး အမြိုးသားရဲ့ ပမျြးမြှလုပျခလစာ (၇၀)ရာခိုငျနှုနျးကို ထပျဆောငျးရရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ တဈခုသတိထားရမှာက ယောငျးအမြိုးသားက လကျရှိကုမ်ပဏီမှာ အနညျးဆုံး တဈနှဈ လုပျကိုငျဖူးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> ကိုယျဝနျဆောငျယောငျးတို့အတှကျ ယောဂကငျြ့စဉျမြား
ယောငျးတို့က လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ အနညျးဆုံး(၆)လ ပေးသှငျးထားခွငျးမရှိဘူးဆိုရငျတော့ မီးဖှားခှငျ့(၁၅)ရကျရရှိပမေဲ့ မီးဖှားစရိတျတှတေော့ အပွညျ့ခံစားခှငျ့ရရှိနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ အာမခံကွေးသှငျးထားသူတှရေဲ့မီးဖှားစရိတျ တဈဝကျကိုသာ ခံစားခှငျ့ရရှိနိုငျမှာပါယောငျးရေ.. ဒီအမြိုးအစားမှာလညျး ယောငျးတို့အမြိုးသားက လကျရှိကုမ်ပဏီမှာ အနညျးဆုံးတဈနှဈလုပျကိုငျဖူးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
မီးဖှားစရိတျတှကေိုတော့ ယောငျးတို့ရငျသှေးတဈယောကျမှေးဖှားရငျ အပျေါကဖျောပွထားတဲ့ အတိုငျး ရရှိနိုငျမှာဖွဈပမေဲ့ ယောငျးတို့က အမွှာလေးမှေးမယျဆိုရငျတော့ ရရှိနိုငျမယျ့မီးဖှားစရိတျရဲ့ နှဈဆထိ တိုးမွှငျ့ခံစားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ (အမွှာလေး ရအောငျသာ မှေးပဈယောငျးရေ )
ကလေးရဲ့ ကနျြးမာရေးအပျေါ သကျရောကျနိုငျတဲ့ မိဘတှရေဲ့ အကငျြ့ဆိုးမြားယောငျးတို့ရေ ဘယျလိုအခှငျ့အရေးတှရေနိုငျလဲ သိပွီးပွီဆိုတော့ ဘဘေီလေးတှကေို စိတျအေးလကျအေး မှေးဖှားလို့ရပွီပေါ့နျော။ ယောငျးတို့ အမြိုးသားတှကေလညျး ယောငျးတို့ ဘေးမှာ စောငျ့ရှောကျပေးနိုငျမှာမို့ ယောငျးတို့ အားငယျစရာမလိုဘဲ ပြျောပြျောရှငျရှငျ ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ မှေးဖှားနိုငျပါစနေျော။
Tags: #child, babies, birth, cost, Husband, Knowledge, leave, man, wife
ကလေးတွေအပူရှပ်တာကို ကုသနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများနဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ
အတုယူလေးစားစရာ ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီး CEO (၅) ဦး
Yin Sandi Ko March 18, 2019
သင်္ဘောသားတွေရဲ့ မဟေသီတွေသာ ကိုယ်ချင်းစာပေးနိုင်မယ့် ခံစားချက် (၅) ချက်
Yin Sandi Ko August 1, 2019
ဇွန်လမှာ မွေးဖွားကြတဲ့ နာမည်ကြီး ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များ
Yin Sandi Ko June 7, 2019